साहो: पैसा र प्रतिभाको बर्बादी वा नयाँ ट्रेन्डको भारतीय फिल्म? – Everest Dainik – News from Nepal
साहो: पैसा र प्रतिभाको बर्बादी वा नयाँ ट्रेन्डको भारतीय फिल्म?
काठमाडौंः ठूलो रकम खर्च गर्दैमा या भारीभरकम स्टारकास्ट राख्दैमा चलचित्र राम्रो बन्दैन भन्ने कुराको उदाहरण हो शुक्रवार रिलीज भएको भारतीय चलचित्र ‘साहो’ । जम्मा ३५० करोड भारू लगात्मा तयार भएको ‘साहो’ तमिल, तेलगु, हिन्दी र मलयालम गरी चार भारतीय भाषाहरूमा रिलीज भएको छ । र, यदि चलचित्र समीक्षकहरूको कुरा मान्ने हो भने बाहुबली २ को कीर्तिमान भङ्ग गर्न सक्ने भनेर देखिएको ‘साहो’मा त्यो क्षमता छैन ।
दुइ वर्ष लगाएर बाहुबली सीरीजबाट ख्याति कमाएका प्रभास र बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री श्रद्धा कपूर लगायत ज्याकी श्राफ, नील नितिन मुकेश, चंकी पाण्डे, ज्याक्लिन फर्नान्डीज, महेश मांजरेकर जस्ता दिग्गज कलाकारहरुलाई कास्ट गरिएको साहो सोचे जस्तो गतिलो बन्न नसकेको धेरैको टिप्पणी छ ।
जम्मा एक सय ७४ मिनेट लामो साहोमा निर्माण पक्षले लगभग प्रति मिनेट दुई करोड़ खर्च गरेको छ तर वेब दुनियाका समय ताम्रकारको शब्दमा भन्ने हो भने फिल्ममा दर्शकलाई मनोरंजन प्रदान गर्न सक्ने साढे तीन मिनेट पनि रहेका छैनन् ।
साहो सबैभन्दा खराब समीक्षा पाएको चलचित्रमा पर्न गएको छ । बलिउड़का प्रख्यात समीक्षक तरण आदर्शले ट्वीट गर्दै यो चलचित्र हेर्दाको अनुभव ‘असहनीय’ रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले चलचित्रलाई आढा स्टार रेटिंग दिँदै साहोको एक शब्दमा समीक्षा गर्ने हो भने ‘असहनीय’ भन्न सकिने बताएका छन् । उनले चलचित्रलाई प्रतिभा, पैसा र अवसरको नराम्रो बर्बादी बताउँदै यसकै लागि कमजोर कथावस्तु, भ्रमपार्ने पटकथा र सिकारु निर्देशन दोषी रहेको बताएका छन् ।
तर प्रभासका धेरै फ्यानहरू भने तरणको रेटिंगमा कुनै दम नहुने टिप्पणी गरिरहेका छन् । उनले यसै वर्ष रिलीज भएको सलमान खान अभिनीत ‘भारत’लाई चार स्टार रेटिंग गरेका थिए । तर दर्शकहरूले भने यसलाई खासै रुचाएनन् ।
कतिपयले त तरणले सुरुदेखि नै कम रेटिंगमा राखेका चलचित्रले निकै राम्रो प्रदर्शन गरेको र राम्रो रेटिंगमा राखेका चलचित्रको हालत भने खासै गतिलो हुन नसकेको बताएका छन् ।
सुमित कडेल नाम गरेका अर्का फिल्म समीक्षक साहोलाई ‘२०१९ को सबैभन्दा ठुलो निराशा’ बताएका छन् ।
कडेलको ट्वीटमा प्रभासकाे अभिनय यसको राम्रो पक्ष रहेको र थुप्रै पात्रहरूको खराब अभिनय यसकै नकारात्मक पक्ष बताइएको छ । उनले भ्रमपार्नव कथानक, पट्यारलाग्दो पटकथा, मध्यम दरजाको एक्शन, खराब निर्देशन जस्ता खराब पक्ष औँल्याउँदै यसलाई हेर्ने ‘जोखिम’ उठाउन आफैं सोच्न भनेका छन् । उनले यसलाई एक स्टार दिएका छन् ।
दक्षिण भारतीय समीक्षक रमेश बाला भने साहोमा प्रभास र श्रद्धा कपूरले आफ्नो उत्कृष्ट अभिनय देखाएको भन्दै यसकै पटकथा अझ राम्रो हुनै गुंजाइश रहे पनि चलचित्र एकपल्ट हेर्दा हुने ट्वीट गरेका छन् ।
चलचित्रमा एक्शन र स्टंट्सका दृश्यमा निकै पैसा उडाइएको छ । तर गतिलो कथा खोज्ने कोशिश भने गरिएको छैन । वेब दुनियाका समय ताम्रकार लेख्छन्, “बिना कथा एक्शन मात्रै कति हेर्न सकिन्छ र? कतै अचार मात्र खाएर पनि पेट भर्न सकिन्छ र?”
साहोको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको यसले दर्शकलाई जोड्न नसक्नु हो । दर्शकलाई कथा बुझ्न निकै गाह्रो छ । सुरुदेखि नै नियन्त्रणबाहिर गाँजेको कथासूत्र हुँदै जाँदा पटक्कै नबुझिने र दर्शक विवश भएर जे जे पर्दामा आउँछ टुलुटुलु हेर्न बाध्य हुने केहीको भने छ ।
साहो व्यावसायिक चलचित्र भएकाले यसमा कलामाथि पूर्ण न्याय हुन नसक्नुलाई केही हदसम्म स्वीकार गरेन सकिएला । तर यसमा न एक्शन रुचिपूर्ण छ न मन छुने प्रेमकथा नै । दुई हजार करोडको चोरी जस्ता ठुल्ठुला कुरा भएर पनि यसमा रोमांच सिर्जित गर्न सकिएको छैन । चलचित्र मसाला फिल्मका दर्शकका लागि पनि त्यति रुचिकर नहुन सक्छ ।
निर्देशक सुजीतले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान फ़िल्मलाई कसरी बढी भन्दा बढी स्टाइलिश बनाउने भन्ने कुरामा मात्र छ जस्तो देखिन्छ । तर उनल कसिलो पटकथाको महत्त्व राम्ररी बुझेकोजस्तो देखिन्न । चलचित्र हेर्दा यसमा देखाइएका अग्ला गगनचुम्बी भवन, हेलिकप्टर, कार या मोटरसाइकलमा चेजिङ् सीन आदिले मात्रै दर्शकलाई झुक्याउन सकिन्न भन्ने कुरा निर्माणपक्षले नबुझेको भान हुन्छ ।
निर्देशक सुजीत चलचित्रमा पैसा कसरी खेर फाल्ने भन्ने ध्याउन्नमा रहेको देखिन्छ । एक दृष्यमा दुई कारहरूमाथि ट्यांक चढाएर कारहरूलाई कच्याककुचुक पारिएको दृश्य छ ।पाँच सेकेण्डको यस दृष्यको चलचित्रको खातामा के महत्व छ भन्ने कुराको पुष्टि कतै देखिन्न ।
निर्देशकमा पैसाको सदुपयोग गर्ने कलाको अभाव देखिन्छ । यसमा लगानी गरनेहरूले के सोचेर निर्देशकलाई अन्धाधुन्द पैसा खर्च गरेन दिए भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन । चलचित्र भित्र प्रश्न उठाउने थुप्रै ठाउँहरू छन् । एउटा दृश्यमा श्रद्धा कपूरलाई गोली लाग्छ, अर्को दृष्यमा उनी ठीकठाक देखिन्छिन्। उनलाई कुन बुटीले सञ्चो लाग्यो यसबरेमा चलचित्रमा कहीं केही छैन ।
यस चलचित्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या निरन्तरताको अभाव हो । यसमा कुनै पनि दृश्य अचानक आउँछ र त्यो दृश्य आउनुको कारण थाहा हुनु पहिल्यै अर्को असम्बद्ध दृश्य आइदिन्छ । राम्ररी नियाल्ने हो भने फिल्ममा काम लाग्ने दृश्यहरुको छायांकन पहिले नै गरिएको र त्यस अनुरूप कथा नभेटेपछि जोडजाम गरेर मिलाएको जस्तो लाग्छ । यसमा सबैभन्दा अपथ्यारो सम्पादकलाई परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि पूर्णतया असम्बद्ध दृश्यहरुलाई जोडेर एउटै कताको रूप दिनु चानचुने काम होइन ।
फिल्म रिलीज हुनुपूर्व यसमा रहेका एक्शन सीनबारे निकै होहल्ला गरिएको थियो । यी दृष्यहरूमा पानीजस्तै पैसा बगाईएको थियों तर त्यसको खासै फायदा भने देखिएको छैन । एक्शन दर्शकलाई रुचिकर नलाग्न सक्छन् ।
फिल्ममा एउटा ‘ब्ल्याक बक्स’को निकै चर्चा सुनिन्छ । सबै पात्रहरू त्यसैलाई हासिल गर्न दौडिरहेका छन् । तर त्यसबाट कसले के प्राप्त गरेन चाहन्छ भन्ने कुराको खुलासा भने कहीं हुन्न ।
सुजीतले चलचित्रमा के भन्न खोजेका हुन प्रष्ट हुन्न। कतिपय अवस्थामा त कलाकार नै रनभुल्ल परेका जस्ता देखिन्छन् ।
पात्रहरूलाई बहुलट्ठी पारा मा प्रस्तुत गरिएको छ । चोर अचानक पुलिस बन्छ र पुलिस चोर । कतिपय अवस्थामा पात्रहरू आफ्नो भूमिका के हो भन्नेबारेमा नै अन्यौलमा परेजस्ता देखिन्छन् ।
महेश मांजरेकरले आफ्नो भूमिका के हो भन्ने थाहै नपाएको जस्तो देखिन्छ । मंदिरा बेदीले किन मन्छेहरूलाई गोली हान्नु परेको हो त्यसबारे पुष्टि हुन सकिएको छैन ।
फिल्म हेर्दा हेर्दै निदाउनु भयो भने ज्याक्लिन फर्नान्डिस पनि चलचित्रमा रहेको थाहै निहुँ सक्छ । निल नितिन मुकेश, टीनु आनन्द इवलिन शर्माको अभिनयले खासै प्रभावित गर्दैन ।
श्रद्धा कपूरले किन प्रभाससँग प्रेम गर्न थाल्छिन् भन्ने कुरा केही गरि बुझ्न सकिन्न । बाहुबली हेरिसकेकाले यस चलचित्रमा प्रभासलाई हेर्नु आकाशबाट भुइँमा झरेजस्तै अनुभव हुन जान्छ ।
नेपालमा यस चलचित्रको हिन्दी संस्करण रिलीज भएको छ । यस संस्करण मा प्रभासको संवाद बोल्ने शैली दिक्क लाग्दो लाग्छ । बाहुबलीको तुलनामा उनको अभिनय प्रभावहीन लाग्छ । गीतहरू काम चलाउ छन्।
पार्श्व संगीतमा केही चित्त बुझाउन सकिन्छ । समग्रमा दुई घण्टा ५४ मिनेट लामो यो चलचित्र भनेजस्तो गतिलो बन्न सकिएको छैन । चलचित्रमा खर्च गरिएको साढे तीन अर्ब ‘यस्तो फिल्म बनाउनु हुन्न’ भन्ने पाठ सिक्न काम लागेको छ ।
कलाकार : प्रभास, श्रद्धा कपूर, ज्याकी श्राफ, नील नितिन मुकेश, एवलिन शर्मा, मंदिरा बेदी, चंकी पांडे, महेश मांजरेकर, टीनू आनंद, वेनेल्ला किशोर, मुरली शर्मा, ज्याकलीन फर्नांडीस
ट्याग्स: Saaho, साहो